Wararkii ugu dambeeyay qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho oo weli xiran – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho oo weli xiran
Waxaa galabta illaa caawa isbadel aan caadi ahayn laga dareemayaa qaar ka mid ah wadooyinka ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyadoona wadooyinkaas ay gebi ahaan xiran yihiin islamarkaana aanay jirin wax dhaq-dhaqaaq ah.
Jidka weyn ee Makka Al-mukaramma illaa isgoyska Banaadir ayaa caawa waxaa lagu daadiyay ciidamo isugu jira nabad-sugid iyo kuwa boolis ah, waxayna gebi ahaan joojiyeen isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga ee halkaasi ka jiray.
Illaa iyo haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in wadooyinkaasi la xiro, balse warar madax banaan aynu heleyno ayaa sheegaya inay ciidamada ammaanka lagu soo wargeliyay in gawaari miineysan ay magaalada ku jiraan.
Warar kale ayaa sheegaya in sababta loo xiray wadooyinkaasi uu yahay in xubno uu ka mid yahay ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ay gaareen guri ku yaalla degmada Hodon ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay tacsi ugu tageen qoyskii uu ka geeriyooday Nabadoon Axmed Diiriye Cali.
Dhinaca kale, waxaan isku daynay inaan la xiriirno saraakiisha sare ee amniga iyo kuwa maamulka gobolka Banaadir, si aan arrinkaan wax uga weydiino, balse waa inoo suurto geli waysay.